အရေပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အရာ ၁၂မျိုး - Hello Sayarwon
အရေပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အရာ ၁၂မျိုး
Dr. Ye Mhan Linn မှ ရေးသားသည်။ 29/08/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဆပ်ပြာ၊ အလှကုန်နဲ့ အစွန်းချွတ်ဆေးတွေကြောင့် အရေပြားနီရဲယားယံတတ်သလို ဝက်ခြံတွေလည်း ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်အသုံးပြုနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကို အာရုံစိုက်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်တာမျိုး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ လုံးဝအသုံးမပြုရသေးတဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ ရက်လွန်ပစ္စည်းတွေတောင် သင့်ဆီမှာ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်အရာတွေက သင့်အရေပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်သလဲဆိုတာ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဆပ်ပြာမှာ အရေပြား၊ မျက်စိ၊ အဆုတ်တို့ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ဖော်မဲလ်ဒီဟိုဒ် ဒြပ်ပေါင်းပါဝင်ပါတယ်။ ဆပ်ပြာဟာ အရေပြားမှာ နှင်းခူဖြစ်စေနိုင်သလို မကြာခဏ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အရေပြား ခြောက်သွေ့ကွဲအက်တဲ့ဒဏ်ကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို အချိန်မီမကုသဘူးဆိုရင် သွေးထွက်ခြင်းကဲ့သို့ ပိုမိုဆိုးရွားတဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဆပ်ပြာအစား အမွှေးရနံ့နဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ မပါဝင်တဲ့ သို့မဟုတ် အနည်းငယ်သာပါဝင်တဲ့ သန့်စင်ဆေးရည်များကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်တဲ့ သန့်စင်ဆေးရည်၊ ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာ၊ အဝတ်အထည် အစွန်းချွတ်ဆေး၊ အိမ်သာသုံး ပိုးသတ်ဆေးရည်၊ ပြတင်းပေါက်သန့်စင်ဆေးရည်၊ ပရိဘောဂများအတွက် အသုံးပြုတဲ့ ပေါလစ်ဆေးရည်တွေ အားလုံးဟာ သင့်အရေပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အစွန်းချွတ်ဆေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးဆေးနဲ့ အမွှေးနံ့မပါတဲ့ အစွန်းချွတ်ဆေးတွေကတော့ အသုံးပြုဖို့ သင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် သဘာဝအစွန်းချွတ်ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ ရေ၊ ဗီနီဂါနဲ့ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါတို့ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဓာတုပစ္စည်းပါဝင်တဲ့ အစွန်းချွတ်ဆေးတွေကို မလွှဲမရှောင်သာ အသုံးပြုရမယ်ဆိုရင် အရေပြားနဲ့ တိုက်ရိုက်မထိတွေ့အောင် လက်အိတ်စွပ်သင့်သလို ၎င်းတို့နဲ့ထိတွေ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ရေနဲ့ပြောင်စင်အောင် ဆေးကြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အပူသည်လည်း သင့်အရေပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ရာသီဥတုပူတဲ့အခါ ချွေးပိုထွက်လေ့ရှိပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာ အနီအဖုအပိမ့်တွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ချည်ထည်များကို ဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် အဆိုပါပြဿနာကို လျော့ချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့သော အစားအသောက်တွေဟာ သင့်အရေပြားနဲ့ ဓာတ်မတည့်တာမျိုး ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အင်ပြင်ထခြင်း၊ အဖုအပိမ့် အနီကွက်များထွက်ခြင်းတို့ဟာ ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် အရေပြားမှာဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်လက်တွေမှာ ဒဏ်ရာအနာတရ တစ်ခုခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် အပူအစပ်နဲ့ အက်ဆစ်ပါဝင်တဲ့ ဟင်းချက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ မထိတွေ့မိအောင် သတိပြုသင့်ပါတယ်။ တစ်ခါတရံမှာ အရေပြားပေါ်က သံပုရာရည်အကြွင်းအကျန်နဲ့ နေရောင်ခြည်တို့ ရောနှောပြီး ဆိုးဆိုးရွားရွား အရေပြားလောင်တာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ မျက်နှာလိမ်းခရင်မ်တွေကို သေချာစွာ စိစစ်ပြီး ရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ Ascorbic acid၊ paraben ကြာရှည်ခံပစ္စည်းများ၊ glycolic acid၊ malic acid၊ lactic acid တို့ပါဝင်တဲ့ ခရင်မ်၊ လိုးရှင်းနဲ့ သန့်စင်ဆေးရည်တွေကို ရှောင်ကြဉ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး အရေပြားနီရဲခြင်း၊ လောင်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ အဖုအပိမ့် အနီကွက်များထွက်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာခဲ့ရင် အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။
နေရောင်ကာလိမ်းဆေးတွေက သင့်ကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အေနှင့် ဘီရန်က ကာကွယ်ပေးနိုင်ပေမယ့် ၎င်းတို့မှာ အသားအရေကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ အများအပြား ပါဝင်ပါတယ်။ အရေပြားဓာတ်မတည့်မှု အများဆုံးဖြစ်စေတဲ့ para-aminobenzoic acid (PABA) ပါဝင်တဲ့ နေရောင်ကာလိမ်းဆေးတွေကို အဓိကရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပြီး SPF 30 နှင့်အထက်ပါဝင်ပြီး မည်သူမဆိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့ zinc oxide ပါဝင်တဲ့ လိမ်းဆေးတွေကို ဦးစားပေးအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ကလေးငယ်များအတွက် သင့်တော်မယ့် နေရောင်ကာလိမ်းဆေးကိုတော့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၇။ ရာဘာ သို့မဟုတ် ရာဘာစေး
ကွန်ဒုံး၊ လက်အိတ်၊ လက်ပတ်နဲ့ ဘရာစီယာကြိုးတွေ ပြုလုပ်ရာမှာ ပါဝင်တဲ့ ရာဘာ သို့မဟုတ် ရာဘာစေးကြောင့်လည်း အရေပြားထိခိုက်တတ်ပါတယ်။
၈။ တစ်ခါသုံး တစ်ရှူးအစို
တစ်ခါသုံး တစ်ရှူးအစိုတွေကို အရေပြား သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့အောင် အသုံးပြုကြတာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ပြန်လျှော်စရာမလိုဘဲ သုံးပြီးတာနဲ့ လွှတ်ပစ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ရှူးအစိုတွေမှာ အရေပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အယ်လ်ကိုဟော၊ အမွှေးနံ့နဲ့ ကြာရှည်ခံပစ္စည်းတွေ ပါဝင်တဲ့အတွက် ရေစိုအဝတ်အသုံးပြုခြင်းက ပိုပြီးသင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတလေပဲ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ရေစိုအဝတ်တွေကိုတော့ သေချာစွာလျှော်ဖွတ် အခြောက်ခံဖို့လိုမှာဖြစ်ပြီး မီးပူတိုက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကို သေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းလျှော်ရည်မှာ phthalate၊ ဖော်မဲလ်ဒီဟိုဒ်၊ 1,4 dioxane စတဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည် မဝယ်ခင် အညွှန်းကို သေသေချာချာဖတ်ရှုပြီး သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်များကိုသာ ရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
၁၀။ Fabric softener
အဝတ်လျှော်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ fabric softener ဆေးရည်တွေမှာ ဓာတုပစ္စည်းများနဲ့ benzyl acetate ကဲ့သို့ အမွှေးနံ့ထွက်စေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ Benzyl acetate ဟာ သင့်အရေပြား၊ မျက်စိ၊ လည်ချောင်း၊ နှာခေါင်းတို့ကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အတွက် သင်သာ ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အဆိုပါဆေးရည်များကို ဂရုပြုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
ကြမ်းပိုးသတ်ဖြန်းဆေးတွေဟာလည်း တစ်ခါတရံမှာ ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်များကို ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ ကြမ်းပိုးသတ်ဖြန်းဆေးများနဲ့ နေရောင်ကာလိမ်းဆေးတို့ကို ရောနှောထိတွေ့မိရင် သင့်အရေပြားထဲ ဓာတုပစ္စည်းတွေ ပိုမိုစုပ်ယူမိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ဝတ်ရတနာ၊ နာရီလက်ပတ်နဲ့ ဇစ်များ ပြုလုပ်ရာမှာ နီကယ် အသုံးပြုပါတယ်။ နီကယ်နဲ့ ဓာတ်မတည့်သူတွေအနေနဲ့ ၎င်းပါဝင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အသုံးမပြုမိအောင် သတိထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
လူ့အရေပြားဟာ ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သော ဓာတုပစ္စည်း၊ သန့်စင်ဆေးရည်၊ လိုးရှင်းနဲ့ ခရင်မ်များကို ထိတွေ့မိရင် အရေပြားနီရဲ ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို ပစ္စည်းတွေက သင့်အသားအရေကို ထိခိုက်စေနိုင်သလဲဆိုတာ သတိပြုခြင်းအားဖြင့် အရေပြားပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
3. Combating Common Skin Irritants. http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/skin-irritants#1. Accessed March 11, 2017.